Soo dejisan Agar.io 1.4.4 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: Agar.io
Agar.io – ah ciyaarta fiidyawga oo xiiso leh tartamada oo online ciyaartoyda kale. Ciyaaryahanka ayaa ku soo bilowday kulankaan uga unugyada yar, taas oo uu yeesho iyo in ay kor size by nuugista qayb badan oo macmal ah oo ku saabsan garoonka lagu ciyaarayo. Ujeedada ugu weyn ee Agar.io waa nuugista unugyada ciyaartoyda kale si loo kordhiyo baaxadda gacanta kuu gaar ah. In Agar.io waxaa ka ah qayb ka mid ah lagu mudayo tirada kala duwan kuwaas oo ku siin unugyada yar oo hoy ka ah kuwa waaweyn ama u jabiyaan unugyada weyn inta lagu jiro shil ku burburi. Agar.io awood u si aad u dalbato khiyaamooyinka kala duwan ah iyo gunno gaar ah gameplay ka xiiso badan oo guulo ah booska keentay in liiska derajada.
Joogitaanka gunno iyo dabinka
The isticmaalka awoodo gaar ah
Ku haboon gacanta
Soo dejisan Agar.io
Faallo ku saabsan Agar.io
Agar.io Xirfadaha la xiriira